Faahfaahin Horudhac Ah oo Kasoo Baxaysa Weerarkii Madaxtooyada. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Faahfaahin Horudhac Ah oo Kasoo Baxaysa Weerarkii Madaxtooyada.
On Mar 7, 2019 275 1
Faahfaahin horudhac ah ayaa laga helayaa weerarkii qaraxa ahaa ee maanta lala beegsaday Koontaroolka koowaad ee xarunta Madaxtooyada kaasoo ay geysatay Xarakada Al-Shabaab oo dagaal kula jirtay Dowladda federalka ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee aan helay ayaa waxay sheegayaan in weerarka ay ku dhinteen 15 isugu jira ilaalada iyo shaqaalaha Madaxtooyada. Gaadiid nooca gurmadka degdegga ah ayaa in muddo ah ku hawlanaa daabulidda meydadka iyo dhaawacyada.
Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid aad u culus. Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkan. Dhawaan madax ka tirsan DF ayaa sheegay in Xarakada Al-Shabaab aysan weerari karin xarumaha dowladda balse ay weerareyso hotelada ay degaan xildhibaanada iyo diblumaasiyiinta.
Weerarkan ayaa waxa uu kusoo aaday xilli Sabtidii lasoo dhaafay ay Xarakada Al-Shabaab madaafiic ku weerartay isla halkan Madaxtooyada.
Abufatima says 3 years ago
Non kufriga la meeliyo
Murtad yaanu nabad gali
Waa cadaw magaagee
Asna yaanu nabad mudan
Muftiga diinki iibsaday
Jihaad mooshin kiis galay
Ku waa inagu maadsada
Marna dura islaam kee
Waligood macaac lena
Waa miro ibliis dhalay
Iyo muqani gaalee
Ayana yaanay nabad mudan
Murtad yaanu nabad mudan